Accueil > Gazetin'ny nosy > Oniversiten’Antananarivo: Nitokona nidina an-dalambe indray ny mpianatra
Oniversiten’Antananarivo: Nitokona nidina an-dalambe indray ny mpianatra
Tsy mety milamina fa tsy maintsy hitrangan’ny korontana ny oniversitem-panjakana eto amintsika. Manaporofo izany ny zavatra nitranga omaly, teny amin’ny oniversiten’Ankatso sy ny teny amin’ny Polytechnique Vontovorona. Raha ny teny Ankatso aloha no resahina dia nifandona indray ny mpianatra izay nitokona nidina an-dalambe sy ny mpitandro ny filaminana avy amin’ny Emmo-sécurité izay tonga maro teny an-toerana. Antony iray ihany moa no nampitokona ireo mpianatra dia ny tsy mbola fivoahan’ny vatsim-pianarana. Matetika dia izay resaka vatsim-pianarana izay raha teo koa no mampitokona ny mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo. Raha ny fanazavana nomen’ny solontenan’ireo mpitokona dia vatsim-pianarana efa-bolana no tsy mbola nivoaka ho an’ireo departemanta sy sampam-pianarana rehetra, ankoatra ny an’ny fakiolte momba ny fitsaboana na ny “médecine”. Ho an’ity sampam-pianarana ity dia vatsim-pianarana roa volana no mbola tsy voaloa ka takian’izy ireo ihany koa ny tokony handoavana izany tsy misy fepetra. Voalaza fa tamin’ny 8 janoary lasa teo no andro tokony nivoahan’izay vatsim-pianarana izay, araka ny fampanantenana nomen’ireo mpitantana ny oniversite, saingy tsy tanteraka izany ka nahatonga ireo mpianatra nanapa-kevitra ny hiroso amin’ny fitokonana. Tahaka ny mahazatra moa dia tao nifanao fotoana teny amin’ny “esplanade” ireo mpianatra vao maraina, avy eo niara-nirona nihazo ny fiantsoanan’ny taxibe. Nosakanan’izy ireo ny arabe ka tsy nisy intsony ny fiara afaka nandeha. Niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana nandrava izay sakana nataon’ny mpianatra izay ka raikitra avy eo ny fifandonana satria nisy tamin’ireo mpianatra no nitora-bato ny mpitandro filaminana, ireto farany kosa dia namaly tamin’ny fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso. Raha ny fantatra dia nisy mpitandro filaminana iray no naratra voatora-bato tao anatin’izay fifandonana izay. Ny farany moa dia niverina niditra tao amin’ny faritry ny oniversite ireo mpianatra nitokona, Ny hariva ihany dia nisy ny fifampidinihana an-databatra boribory teo amin’ny solontenan’ireo mpianatra sy ny tompon’andraikitra ny oniversite ka nisy ny fehin-kevitra nivoaka izay milaza fa tsy maintsy hivoaka amin’ity herinandro ity izay vatsim-pianarana izay. Marihana fa tsy teny Ankatso ihany no nanao fihetseketsehana ny mpianatra fa nahitàna izany koa teny amin’ny Polytechniques eny Vontovorona. Nitaky ny hamoahana ny vatsim-pianarana efa-bolana tsy voaloa ihany koa ny mpianatra ny Polytechnique, tahaka ireo namany eny amin’ny oniversiten’Ankatso, ary mitaky ihany ny fanatsarana ny fampianarana amin’ny ankapobeny.
Fahapoteham-piainana: Tsy hangina intsony ny vahoaka amin’ny sabotsy
Mandia taona vaovao ny fiainan-janak’olombelona ity. Taona efa iandrandran’ny maro eto Madagasikara fa hirosoana amin’ny fanovana fa ampy izay nifampitazanana sy nifandrirarirana teto izay. Ny fiainam-bahoaka anefa tsy mitsahatra miha-potika hatrany. Toraka izany koa ny firenena. Ny hetsika hotarihin’ireo tafika tranainy efa misotro ronono izay hitakian’izy ireo ny zony amin’ny elanelan’ny vola fisotroan-drononony tsy mbola nisitrahany sy ny fanitsiana izany hifanaraka amin’ny didy aman-dalàna efa nivoaka, nefa izirizirian’ny fitondram-panjakana tsy ampiharina sy tsy tanterahina izany izao no hetsika voalohany handraisana ity taona vaovao ity raha ny hetsi-pitakian-jo no asian-teny. Aorian’io dia mety hihetsika koa ny sendikan’ny mpiasa amin’ny ankapobeny ka ho fanoitran’izany ny nanjo ireo mpiasam-panjakana notapahina karama tsy ara-drariny.
Ny sabotsy faha-20 janoary ho avy izao no nofaritan’ireo tafika tranainy hanaovana an’io hetsika io, ka raha ny fantatra dia tsy ny tafika tranainy efa misotro ronono ihany no handray anjara amin’izy io fa ny vady aman-janak’izy ireo koa sy ny vady amanjanak’ireo efa nodimandry, indrindra fa ny vokatr’io tsy fanatanterahana ny tokony hisitrahan’izy ireo ny zony io no fototry ny nandaozan’izy ireny ity tany fandalovana ity. Izy rehetra ireo dia samy mahatsiaro ho isan’ny ianjadian’ny tsy fanatanterahan’ny fitondram-panjakana ny fanefana ny tambin-jon’ireo raim-pianakaviany.
Re koa anefa fa ireo tafika amperin’asa koa dia maro no hanotrona an’ireo zokiny sy raiamandreniny efa eo ampisotroan-dronono amin’izao fotoana satria tsinjon’izy ireo fa raha mahazo vahana ny fizirizirian’ny fitondram-panjakana amin’ny tsy fandoavana ny zon’ireo zokiny dia hihatra sy hitsena an-dry zareo mbola amperin’asa ankehitriny koa rehefa tonga amin’io vanim-potoana hisotroan-dronono io izy ireo. Ka hisorohana an’izay dia mijoro dieny izao hanohana sy hankahery an’ireo zoky izay miroso amin’izao fivoriam-pitakiana izao ireo mbola amperin’asa.
Etsy andaniny koa anefa, dia fantatra fa ireo olom-pirenena tsotra isam-pianakaviana dia misy ny fifanentanan’izy ireo mba hankahery sy hanohana ny hetsik’ireto tafika efa misotro ronono. Ny antony dia ho fanoitran’ny fampahombiazana ny fitakian-jo eo amin’ny vahoaka izany satria vanim-potoana tsy tokony hanehoana fahalainana na fihetseham-po intsony izao fa efa mananontanona ny isan-tokonam-baravarana ny fahapotehana.
Ny re tamin’ny tompon’andraikitra mpikarakara an’ity hetsiky ny tafika tranainy ity omaly hariva dia tsy eny Andrefan’Ambohijanahary toy ny nahazatra sy araka ny efa nampahafantarina hatramin’ny volana desambra no hanaovana ity hetsika ity fa eny Antsahamanitra. Ny dikan’izany, vao mainka ho azo antoka ny fifehezana ny filaminana izany.
Fa ny tsy azo hamaivanina amin’izao vanim-potoana izao koa dia ny hetahetan’ny maro mba hirosoana amin’ny dingana iray ambonimbony kokoa hitenenana amin’ny mpitondra fanjakana fa “tsy ara-drariny intsony izao vokatry ny fomba fitantanana ny raharaham-piaraha-monina sy raharaham-pirenena ankapobeny izao ka ilàna fifampifehezana entitra, raha mbola mihevi-tena fa mpitondra fanjakana mihaino ny feom-bahoaka ny mpitondra”. Ny olom-pirenena amin’ny ankapobeny mantsy, hoy ny fanamarihana re tetsy sy teroa, dia tsy manana sehatra iantsoana mivantana ny fahatsiarovan-tenan’ny mpitondra sy anehoana hevitra ankoatry ny hetsika ampibaribariana ny fivondronan-kerin’ny vahoaka, ka io fihaonamben’ny tafika tranainy hitakian’izy ireo ny zony io dia teboka iray ahafahan’ny vahoaka amin’ny ankapobeny koa maneho izay firaisany hiana amin’ny rehetra ianjadian’ny tsindrihazolena sy ny tsy rariny ary izay endri-panamparam-pahefana miteraka fahapoteham-piainan’ny ambanilanitra izay.